नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई गोरखा २ बाट आँखा चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेससँगको तालमेलमा भट्टराई गोरखा २ बाट मंसीर १० गते प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लड्नेछन्।
नयाँ शक्तिका गोरखास्थित नेता रमेश पोखरेलका अनुसार आँखा चुनाव चिन्ह लिनेबारे कांग्रेससँग औपचारिक रुपमा सहमति भइसकेको छ। उनले थपे, ‘पार्टी संयोजक डा. भट्टराई आँखा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ। रुख चिन्ह लिने भन्ने होइन। आँखा चिन्ह लिएर चुनावमा जाने पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ।’
नयाँ शक्तिले गोरखा २ मा एउटा प्रदेशसभा क्षेत्र पनि लिएको छ। सो क्षेत्रमा हरिशरण आचार्य चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। गोरखामा वाम गठबन्धन, कांग्रेस र नयाँ शक्तिबीचको गठबन्धन, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपालगायत दलहरुले उमेद्वारको टुंगो लगाइसकेका छन्।
गोरखा २ मा वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसको समर्थनमा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. भट्टराईबीच चुनावी भिडन्त हुने भएपछि देशकै ध्यान सो क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएको छ। श्रेष्ठ र भट्टराईसहितका उम्मेदवारले आइतबार बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उमेद्वारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
यस्तै गोरखा १ मा कांग्रेसबाट चीनकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि टिकट पाएका छन् भने वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकै हरि अधिकारी उम्मेदवार बनेका छन्। प्रदेश क मा कांग्रेसका धिरन थापा र वाम गठबन्धनबाट लेखबहादुर थापा भिड्ने भएका छन्।
प्रदेश ख मा कांग्रेस नेता राजेन्द्र बजगार्इँ र वाम गठबन्धनबाट एमाले केन्द्रिय सदस्य रामशरण बस्नेत चुनाव भिड्दैछन्। वाम गठबन्धन अन्र्तगत एमालेले गोरखामा एउटा मात्रै क्षेत्र पाएको छ। गोरखा २ मा गठबन्धनका नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा उमेद्वार हुन् भने प्रदेश क मा कमला नहर्की र ख मा अमर तमुले टिकट पाएका छन्।
दलहरु तिहारका बेला पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। आइतबार मनोनयन दर्ता गर्ने दिन भएकाले भाइटीकाको दिन शनिबारदेखि नै उमेद्वारहरु जिल्ला आउने क्रमः सुरु भएको छ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दलहरुलाई फरक–फरक समयमा उमेद्वारी दर्ता गर्न आउन भनेको छ। एकै पटक फरक दलहरु दर्ता गर्न आउँदा झडप हुनसक्ने अनुमान गर्दै व्यवस्थित गर्न लागिएको हो। मनोनयन दर्ताका लागि सबै तयारी पूरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बसन्तराज पौडेलले बताए।
प्रकाशित ५ कार्त्तिक २0७४ , आइतबार | 2017-10-22 07:19:06